पानी आपूर्ति प्रणाली, ताप प्रणाली र कम दबाब बाफ मा पिरोया जडानहरू सील लागि पेस्ट "Unipak" प्रयोग। यसलाई उच्च चिपचिपाहट संग खैरो कुरा बुझाउँछ।
पास्ता पाइपलाइन "Unipak" खाद्य उद्योग प्रयोगको लागि स्वीकार्य छन् जो पदार्थ समावेश छ। यी फैटी एसिड, खनिज, प्राकृतिक मूल समावेश खुट्टाफिन तेल र पानी। त्यसैले, यो पेस्ट मानव स्वास्थ्य मा एक विनाशकारी प्रभाव छैन। साथै, प्रदूषित गर्दैन पेस्ट, यो पूर्ण सुरक्षित र गैर-प्रदूषण छ। कन्ड्युट पानी गुणस्तर उपकरण प्रयोग पछि परिवर्तन गर्दैन।
पास्ता "Unipak" राम्रो प्रवाह दर छ, यो अर्थव्यवस्था को दृष्टिकोण देखि प्रयोग गर्न लाभप्रद छ। कारण पेस्ट असल स्थिरता गर्न सजिलो र काम गर्न रमाइलो छ।
सन फाइबर दृढ साथ सँगै प्रयोग "Unipak" पेस्ट सील जो दबाव गर्दा जकडन कायम राख्ने, 8 बार र तापमान प्लस 140 डिग्री सम्म सामना गर्न सक्छन् एक मिश्रित प्रदान गर्दछ। पनि टाँस्न कम्पन withstands।
को छाप पेस्ट गुणस्तर परीक्षण र प्राप्त प्रमाणपत्रहरू को परिणाम पुष्टि भएको छ। विनिर्देशों बारम्बार डेनिस प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा बाहिर परीक्षण पुष्टि।
लाभ को निम्न हालतमा हो:
उच्च दबाबको (8 पट्टी सम्म) रोक्नु।
अपरेटिङ तापमान - प्लस 140 डिग्री सम्म।
पानी गुणस्तर लागि सुरक्षित।
यो विषाक्त छैन।
प्रत्याभूति आफ्नो जीवन - पाँच वर्ष।
यो जंग विरुद्ध सुरक्षा।
यो खियाले को गठन रोक्छ।
मिश्रित (समायोजन) को सम्भव झुकन।
मिश्रित पार्सिङ सुविधा।
यो कम्पन withstands।
डिजाइन पेस्ट "Unipack" रिसाव विरुद्ध मात्र छैन पानी पनि बाफ सुरक्षा गर्न। सील लागि एक साथ हालतमा प्रयोग सन संग (फाइबर वा कर्ड को रूप मा मुहर गर्न) पिरोया जडानहरू संग पानी (चिसो र तातो) र बाफ पाइपिंग सिस्टम मा कम दबाब छ। यो एक 100% ग्यारेन्टी सुरक्षा को प्रदान गर्दछ।
पास्ता "Unipack" प्रयोग, अपघटन र दहन समयमा ओक्सीकरण देखि सनी सुरक्षित राख्दछ। तसर्थ, जडान जंग विरुद्ध सुरक्षित छ। खियाले को पेस्ट समावेश खनिज घटक बाधित।
एक लाभ आवश्यक छ यदि जडान खोल्ने गर्न टाँस्न क्षमता छ। थ्रेड जडानहरू समायोजन गर्दा पास्ता "Unipack" लचीलापन दिन्छ। यसरी यो निष्ठा गुमाउने बिना 45 डिग्री को कोण अनुमति।
pastes को आवेदन मा पहिलो चरणको - सूत्रहरू को तयारी। यो swarf र माटो को स्पष्ट हुनुपर्छ। थप यसको सम्पूर्ण लम्बाइ साथ फाइबर को एक वर्दी तह कस सन घाउ छ। को दिशा मा सार्न पर्छ थ्रेड पिच। शीर्ष तह आवश्यक रकम मा समान रूप netolstym "Unipak" पेस्ट लागू गरियो। एक समय पछि मुद्दा जाँदै। त्यहाँ कुनै पनि अतिरिक्त पेस्ट छ भने, तिनीहरूले सजिलै एक नैपकिन संग हटाउन सकिँदैन। यो विन्दुमा देखि, तपाईं पाइपलाइन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
कसरी ठोस तल्ला मा laminate फर्श राख्नु गर्न? कि ठोस तल्ला मा भएको laminate अन्तर्गत राख्न?
पत्थर गलियारे, अपार्टमेंट मा एक भान्सा संग खत्म
निबंध "स्वस्थ जीवन शैली"। तपाईं स्वस्थ हुन चाहनुहुन्छ भने स्वभावका,
पवित्र नतालिया के बनाउँछ?
समीक्षा: "हाम्रो चिहान बाट मान्छे।" फिल्म, अभिनेताहरु र को भूमिका को प्रीमियर